IKhalenda yoQoqosho lwe-Forex-Funda ukurhweba
Imisitho yoqoqosho yamanye amazwe inefuthe elibonakalayo kwiimarike zezemali. Xa kuthengiswa izinto zorhwebo, ii-indices, ii-cryptocurrensets okanye ii-forex ngababini, ukuqonda okunzulu kweziganeko zekhalenda yezoqoqosho kubalulekile ekunciphiseni umngcipheko ngelixa kusandiswa inzuzo.
Funda 2 Urhwebo lubonelela abathengisi ngekhalenda yezoqoqosho ebanzi, ephethwe ngexesha langempela. Ukongeza kwimvelaphi yangemva yemfundo yesiganeko ngasinye esibalulekileyo, ii-tweets eziphilayo zibonelela ngolwazi olubalulekileyo kumcimbi oqhubekayo. Nokuba umntu ulandela i-forex, i-cryptocurrensets, izinto zorhwebo okanye ii-indices, ukuzihlaziya kunye nezinto ezisisiseko zentengiso kunye nokufumana ii-tweets zexesha lokwenyani kubahlalutyi bethu beengcali njengoko isiganeko senzeka kubalulekile ukuqonda ngempumelelo isiganeko ngasinye soqoqosho.
IKhalenda yezoQoqosho yezoRhwebo esi-2 sisixhobo esinamandla kunye nemfuneko kubarhwebi abanomdla kurhwebo lokuhambisa iminyhadala ngexesha lokwenyani.
Ikhalenda Economic TradingView
Yintoni eFundwayo kwiKhalenda yezoQoqosho zezoRhwebo nge2?
Imakethi ye-forex inokuba yindawo ehamba ngokukhawuleza, ekwaziyo ukutshintsha umkhombandlela ngokuqhwanyaza kweliso. Esinye sezizathu zokuba kutheni sinamandla kangaka kukukhutshwa kwamaxesha ngamaxesha kweengxelo zoqoqosho, iindaba kunye nedatha yeenkcukacha manani. Ukuze uhlale ukhuphiswano lokukhokela, kubalulekile ukuba umrhwebi osebenzayo akwazi ukufikelela kwikhalenda ye-forex ebanzi. Isixhobo esinamandla nakweyiphi na iarhente yomrhwebi, ikhalenda yokufunda ye-FX ye-2 yokufunda kukudibanisa uhlalutyo lweengcali kunye netekhnoloji yokusika. Inomxholo obanzi wobunzulu bayo yonke imicimbi yentengiso yotshintshiselwano lwangaphandle, kunye nokuqonda okuxabisekileyo malunga nokukhutshwa kukhetho ngalunye kwintengiso, ikhalenda ye-forex kwiLearn 2 Trade yindawo yokuqala yokurhweba. Akwanelanga ukwazi ukuba isiganeko soqoqosho siza kwenzeka nini. Ukuba nobungcali bokuqonda ifuthe kwisibini osithandayo semali, kunye nentengiso iyonke, kubaluleke kakhulu. Yiyo le nto eyenza ukuba ikhalenda yethu ye-forex ibe yeyohlukileyo- ayiboneleli ngedatha enzima kuphela kodwa isakhelo somxholo esinokunceda ukuphucula ukuthengisa kwakho.
Ukuhlaziywa kokugqibela: Epreli 20th, 2020